Garlic, waa antibiyooti awood leh! - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB • Daawooyinka dabiiciga ah • SAYNISKA • daryeelka Garlic, waa antibiyooti awood leh!
Garlic waxaa loo isticmaali jiray sanado badan si loo kariyo, laakiin sidoo kale waxay khudradda ka dhigtaa mid aan badnayn.
Alaabada sunta ayaa ku siinaya maahan kaliya urta xooggan, laakiin sidoo kale faa'iidooyin caafimaad oo badan. Miyaad ogtahay in hal milligram oo ka mid ah alliksin ay 15 ka badan tahay awood ka badan penicillin? Tusaale ahaan, allicin wuxuu ka ilaaliyaa bakteeriyada cudurada wadnaha, fayruusyada, sumeeyayaasha iyo Staphylococcus aureus (MRSA). Sidoo kale waa mid ka mid ah cuntooyinka ugu badan ee ka hortagga kansarka.
Allicin waxaa loo beddelaa sulfonic acid, wakiilka oo baabi'inaya xagasha lacag la'aanta ah sida ugu dhakhsaha badan. Daraasado kala duwan ayaa sidoo kale muujiyay in toonta ay kordhiso tirada T limfacsiyada ee dhiigga, kaas oo gacan ka geysanaya la dagaallanka fayraska.
Wanaagyadani waxay ku yaallaan oo kaliya in toon cusub, toonta la qalajiyey ama budada ma bixiso faa'iidooyin isku mid ah. Sidaa darteed waa muhiim inaad tuujiso, googooto ama burburiso dhajinta dhoobada cusub oo u fariiso daqiiqado 5 ka hor inta aadan u isticmaalin si aad u dhaqaajiso allicin.
Marka, maraq yar oo toon ah, miyaad jeceshahay?